Sirni Sidaamo afoo manneen barnootaa filatamoo naannoo Oromiyaa keessatti jalqabuun ifoome. - ETHIOPIANS TODAY
Jan 19, 2021 Orom_Sidamo
Sirni Sidaamo afoo manneen barnootaa filatamoo naannoo Oromiyaa keessatti jalqabuun ifoome Sirni barnoota afaan Sidaamaa jalqabsiisuu kun Godina Arsii Lixaa aanaa Wandoo ganda Buusaatti eegalame.
Sirna Sidaamo afoo jalqabsiisuu kanarratti Hogganaan Biiroo Barnootaa naannoo Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo akka dubbatanitti Ummanni Oromoo fi ummanni Sidaamaa ummata obboleeyyanii fi waliin jiraatuudha. ummata qubee walfakkaatu qabuu fi Ummata gargar bahuu hin dandeenyedha. Ijoollee keenya afaan barsiisuun carraa hojii babal’isuun hoji dhabdummaa hir’isuuf daran gargaaruu danda’a jedhaniiru.
Pirezidaantii I/A fi Hogganaa Biiroo Barnootaa naannoo Sidaamaa Obb. Baqqalaa Tusiisaa akka jedhanitti Ummanni Oromoo fi ummanni Sidaamaa ummata haadhaa fi abbaa tokkooti. Nuti hortee afaan kuushii fi ummata bara dheeraaf waliin jiraachaa turreedha. Kanaaf ijoollee Keenya afaan Oromoo fi afaan Sidaamaa ni barsiisna jedhaniiru.
Bulchaan Bulchiinsa Godina Arsii Lixaa Obb. Abarraa Bunoo sirna kana irratti akka dubbatanitti Ummanni keenyaa fi Ummanni Sidaamaa sababa sirna wayyaaneef walitti bu’aa tureera.
Amma sirni wayyaanee kun burkutaa’ee jira. Yeroon amma irra geenyee jirru yeroo sabdaneessumman dhugaa hojiirra ollaa jiruu fi Ummanni Keenya afaan walii barachuun waliin jiraachuu eegaleedha jedhaniiru. Afaan naannolee ollaa barachuun hawaasa dingdee ummataa guddisuu keessatti gahee Olaanaa akka qabutu himama.